गुञ्जा राय, “कालो दिवस”को समाचार शेयर गरेपछि जागिर चट, के भन्छिन् उनी ? – Pahilo Page
Saturday October 23, 2021 |
गुञ्जा राय, “कालो दिवस”को समाचार शेयर गरेपछि जागिर चट, के भन्छिन् उनी ?
८ आश्विन २०७५, सोमबार ०९:१२ 1255 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ८ असोज । संविधान दिवसको विरोधमा असोज ३ गते मधेशी दलले ‘कालो दिवस’ मनाए । सो कालो दिवससम्बन्धी समाचार आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरेको भन्दै एकजना कर्मचारी सरकारीले जागिरबाट हात धुनु परेको छ ।
जिल्ला अदालत धनुषामा खरिदार (करार) पदमा कार्यरत गुञ्जा रायलाई समाचार सेयर गरेको आरोपमा जागिरबाट बर्खास्तीमा परेकी हुन् । उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तो दाबी गरेकी हुन् । महोत्तरीकी रायले यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गर्नुको साथै मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थामा पनि गरेकी थिइन् ।
स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेकी रायले आफू पहिलादेखि अन्यायको विरुद्ध लड्ने भएको हुनाले यसमा चुप लागेर नबस्ने बताइन् । पत्रकार सम्मेलनपछि रातोपाटीसँगले उनीसँग बर्खास्तीका विषयमा केन्द्रीत रहेछ छोटो कुराकानी गरेको छ :
फेसबुकमा समाचार सेयर गरेकै कारण तपाईँ बखास्तीमा पर्नुभयो भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
–मसँग त कुनै प्रमाण छैन तर मसँग अदालतका श्रेस्तेदार राधाकान्त झाले कुरा गरेको कारण फेसबुकमा समाचार सेयर गरेकै कारण मलाई हटाएको कुरामा विश्वस्त छु ।
उहाँले के कुरा गर्नुभएको थियो तपाईसँग ?
–असोज ३ गते संविधान दिवसको विरुद्धमा मनाएको कालो दिवसको समाचार मैले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरेको थिए । नियमित जस्तै ४ गते कार्यालय गए । कार्यालय जाने वित्तिकै श्रेस्तेदार राधाकान्त झाले मलाई बोलाएर संविधान दिवसको विरुद्धमा भएको गतिविधिको समाचार तपाईले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको छ भनि सोध्नुभयो ।
मैले भने, ‘हो सर ।’ अनि उहाँले ‘कालो दिवसलाई समर्थन गर्नुभएको हो’ भनेर सोध्नुभयो । मैले भने, ‘होइन, समर्थनमा होइन । जस्ट सेयर मात्र गरेको हुँ मेरो त्यसमा कुनै समर्थन छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सेयर गर्नु भनेको समर्थन जस्तै हो, तपाईलाई थाहा छैन ।’ मैले ‘छैन सर’ भने । त्यसपछि उहाँ केही बोल्नुभएन । म त्यो दिन आफ्नो काममा लागे । पाँच गते कार्यालय गएपछि अदालत प्रशासनले म्याद नथपिएको चिठी थमाईदियो ।
त्यसपछि के गर्नुभयो ?
–चिठी दिएपछि मैले थाहा पाएकि हिजो समाचारको विषय लिएर श्रेष्तेदारसँग कुरा भएको थियो । कामबाट हटाएको चिठी होला । म त्यो चिठी लिएर घर फर्के । घर फर्केपछि मैले अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीलाई फोन गरे । मैले सबै घटनाक्रम सुनाए । अनि उहाँले यो प्रशासनिक कुरा हो ।
उतै बुझ्नुस् भनि कुनै रेसपोन्स गर्नुभएन । दिनभरि म यसै गन्थनमन्थनमा रहे । साथी र घरपरिवारसँग सल्लाह गरे । सबैले मलाई यसलाई बहसमा ल्याउनुपर्छ भनि सल्लाह दिए, मैले सोही सल्लाहका आधारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरे ।
एउटा सरकारी कर्मचारी भएर फेसबुकमा त्यस्तो समाचार सेयर गरेको छु भनि गलत लागेन ?
–पहिलो कुरा मैले त्यहाँ आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छैन । कसैले लेखेको समाचार मैले सेयर गरि दिएको मात्र हुँ । त्यसरी सेयर गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा मैले बल्ल थाहा पाएको छु । अहिलेको नयाँ कानुनमा त्यो कुरा उल्लेख छ । तर मेरो भनाई यति हो कि मबाट गल्ती भएको हो भने एकचोटी आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुपथ्र्यो ।
पहिला मसँग स्पष्टिकरण सोध्नुपथ्र्यो । मलाई जवाफ दिने मौका दिनुपथ्र्यो तर त्यस्तो कुनै मौका नदिइ एकैचोटी चिठीनै हातमा थमाईदिनु भनेको ममाथि अन्याय भएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । जसले जस्तोसुकै गल्ती गरेपनि एकचोटी आफ्नो कुरा राख्ने मौका अवश्य दिन्छन् ।
मैले गल्ती गरेको छु भनि महसुस भएको हो ?
–गल्ती भन्दा पनि त्यो अन्जानमा भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई । यसरी समाचार सेयर गर्दा कारवाही हुन्छ भनि मलाई थाहा थिएन । थुप्रै कर्मचारीहरुले फेसबुकमा के–के लेखिरहेका हुन्छन् ।
सेयर गरिरहेका हुन्छन् तर कसैलाई केही भएको छैन । ल ठिक छ मैले गरे । त्यो गलत भयो तर एकचोटी त मौका दिनुपथ्र्यो । त्यो न्यायलय हो, कसैमाथि फैसला गर्दा विपक्षीको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । प्रमाणहरु हेर्नुपर्छ तर न्यायलयले नै ममाथि अन्याय गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलन नै किन गर्नुभयो त ?
–ममाथि आज जे भयो त्यो भोली गएर अरुमाथि नहोस् भनि मैले एउटा बहस चलाएको हुँ । म जस्ता थुप्रै करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु छन् । उनीहरुमाथि यस्तो अन्याय नहोस् भनेर मैले यो कदम चालेको हुँ । विगतमा मैले विभिन्न समाजिक संघ–संस्थामा काम गरेको छु ।
महिलाको हित र अधिकारका लागि लडेको छु । वकालत गरेको छु, आज म माथिनै यस्तो भयो, म कसरी चुप लागेर बस्न सक्छु । मैले कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर नारा लगाएर त्यस्तो काम गरेको छैन ।
संविधान दिवसको दिन त्यसको विरुद्धमा कालोदिवस मनाउनु ठिक थियोकि गलत ?
–म सही हो या गलत त्यो भन्दिन् । म सरकारी कर्मचारी थिए, त्यसको मार्यादामा बसेको थिए । संविधानमा सबै कुरा गलत हुन्छ भने होइन । धेरै यस्ता कुराहरु छन् जो अग्रगामी छन् । जनताको हितमा छन् । उत्पीडित समुदायको हितमा छन् ।
त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ तर कतिपय कुरा संशोधन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । संविधानमा यस्ता कतिपय कुराहरु छन्, जसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । जुन कुरा सरकारले सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने भनिरहनुभएको छ ।
तपाईको अभियान पत्रकार सम्मेलन गरेर सकियो कि अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
–म यसलाई बहसको विषय बनाउँछु । फेरि अरुमाथि पनि यस किसिमको कुनै अन्याय नहोस् भनि म यसलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँछु । संविधानमा सबैलाई मौलिक अधिकार दिएको छ । नागरिकको आफ्नो मौलिक अधिकार छ ।
कसैको स्वतन्त्र मौलिक अधिकार हनन् नहोस् भनि म बहसमा ल्याउँछु । म पहिला मिडियामा काम गरिसकेको, समाजिक संस्थामा काम गरिसकेको र एउटा न्यायलयमा पनि काम गरिसकेको हुनाले यसलाई अगाडि बढाउँछु ।
तपाईको बहस राजनीतिक मुद्दा पनि बन्न सक्छ, भोली राजनीतिमा पनि आउनुहुन्छ कि ?
–होइन, अहिले राजनीति गर्ने मेरो कुनै सोंच छैन । मैले पहिलादेखि जागिर गरेको कारणले पुनः म जागिरमै जान्छु तर भविष्यको बारेमा कसैले केही भन्न सक्दैन । म पत्रकार थिए, पछि समाजिक संघ–संस्थामा काम गरे । त्यसपछि जागिरमा गए । त्यसैले भविष्यमा के गर्ने भनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर मेरो साेंच जागिरमै जाने हो ।
डिग्री शिक्षा हासिल गरेर मात्र हुँदैन, मुख्य कुरा सीप हो : शिक्षालय प्रमुख दाहाल
पानीजहाज आउँदैछ, बबण्डर गर्नेबेला भएको छैनः देवेन्द्र पौडेल
भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने मौका गुमाउन चाहन्नौं
‘भारतीय र नेपाली क्रिकेटरको भिन्नता अवसर मात्रै हो’
आज कहाँकहाँ पर्दैछ ठूलो पानी ? मौसम विभागले दियो यस्तो चेतावनी
शाहरुख खानका छोरा आर्यनले पाएनन् जमानत
राशिफल: कार्तिक २ गते मंगलबार
कार्तिक ५ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
राशिफल: कार्तिक ३ गते बुधबार
थप ५१३ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु
बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १११ पुग्यो, ३३ जना वेपत्ता (सूचीसहित)
जन्मदर्ता नहुँदा रोकियो विद्यालय भर्ना
अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास हुदैनः परराष्ट्रमन्त्री खड्का
१९ वर्षीया सिमाले सेतीको भेलमा हाम फालिन
चीनको रासायनिक भट्टीमा विष्फोट, ४ जनाको मृत्यु ३ घाइते
अमेरिकी ड्रोन हमलामा अलकायदाका मास्टरमाइण्ड हामिदको मृत्यु
आज यी स्थानमा वर्षाको सम्भावना
आज देशभरका वडामा एमाले अधिवेशन हुँदै
कार्तिक ६ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल